ယူရို ၂၀၂၁ ခြေစစ်ပွဲ နောက်ဆုံးရလဒ် - Beteuro2021
Posted on 21 April 2021 21 April 2021 by Khương Duy
ယူရို ၂၀၂၁ ‌ခြေစစ်ပွဲ ပတ်ပတ်လည် မဲနှိုက်ခြင်း ယခုရာသီကို မျှော်လင့်နေသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘောလုံးပရိသတ်များ၏အာရုံကို ဆွဲဆောင်ရန်မှာပြသနာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ယူရို ၂၀၂၀ ဗိုလ်လုပွဲကိုတစ်နှစ်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သောအခါဖြစ်သည်။ ယူရို ၂၀၂၁ ခြေစစ်ပွဲကိုထိုနေရာတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ လာမည့်ဆောင်းပါးမှတဆင့်တိကျသောသရေကျသည့်ရလဒ်နှင့်အမျိုးသားအသင်းများ၏အသေးစိတ်အချိန်ကိုကြည့်ပါ။
ယူရို 2021 အရည်အချင်းအကျဉ်းချုပ်
နောက်ဆုံးကပ်ရောဂါ၏လွှမ်းမိုးမှုအပြီးတွင်ယူအီးအက်ဖ်အေဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ နွေရာသီအထိယူရို ၂၀၂၀ ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ပြီးနောက်ယူရို ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအချိန်ဇယားကို ၁၁ / ၆-၁၁ / ၇ / ၂၀၂၁ တွင်လည်းတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ လာမည့် ၁၀ လအတွင်းအုပ်စုအဆင့်ကိုပရိတ်သတ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်အကောင်းဆုံးအသင်း ၈ သင်းကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ယူရို ၂၀၂၁ ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးလက်မှတ် ၄ ခုကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်မျှော်လင့်ရသည်။
ထို့ကြောင့်ယူရို ၂၀၂၁ အုပ်စုအဆင့်သည် 1/8 နှင့်လေးပုံတစ်ပုံအဆင့်ပြိုင်ပွဲများမ၀င်မီ ၄ ပွဲကစားရမည်ဖြစ်သည်။ အထင်ရှားဆုံး အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဆင့်၌ရှိသည့်အသင်းများ သို့မဟုတ် ထူးချွန်သောတတိယတန်းသည် နောက်အလှည့်အပြောင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ ပွဲစဉ်အုပ်စုများ၊ နေရာများ၊ ယခင်ကာလများမှရလဒ်များကိုရယူခြင်း စသည့် အချက်အလက်များအားလုံးသည် အစီအစဉ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ယူအီးအက်ဖ်အေ ယူရို ၂၀၂၁ ခြေစစ်ပွဲရလဒ်များ
ရှုပ်ထွေးသောကပ်ရောဂါကြောင့် ယူအီးအက်ဖ်အေသည် တရားဝင် ယူရို ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် အုပ်စုအဆင့်နှင့်တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး ရင်ဆိုင်ရမည့်အဖွဲ့များ၏ ရလဒ်များကိုမကြာမီဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အောက်ပါတို့သည် round-robin ပြိုင်ပွဲ နှင့် ကစားသည့် ယူရို ၂၀၂၁ ကစားပွဲပွဲစဉ်စာရင်းဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အေ:အိုက်စလန် နှင့် ရိုမေးနီးယား , ဘူ‌ဂေးရီးယား နှင့် ဟန်ဂေရီ.
အဖွဲ့ ဘီ: ဘော့စနီးယား – ဟာဇီဂိုဗီးနား နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်,စလိုဗားကီးယား နှင့် အိုင်ယာလန် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
အဖွဲ့ စီ : စကော့တလန် နှင့် အစ္စရေး, နော်ဝေး နှင့် ဆားဘီးယား
အဖွဲ့ ဒီ: ဂျော်ဂျီယာ နှင့် ဘီလာရုစ်, မြောက် မာစီဒိုးနီးယား နှင့် ကိုဆိုဗို
ယူရို ၂၀၂၁ အုပ်စုအဆင့်ကို အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ပါ၀င်ရန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြတ်ကျော်သွားသောအကောင်းဆုံးအသင်း ၄ သင်းကိုရွေးချယ်ရန်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အောက်ပါရလဒ်များကိုယူရို ၂၀၂၁ အပြန်အလှန်ပြိုင်ပွဲများမှအသင်းများသို့ခေါ်ယူသည်:
အဖွဲ့ အေ: တူရကီ နှင့် အီတလီ, ဝေးလ်စ် နှင့် ဆွစ်ဇလန်
အဖွဲ့ ဘီ: ဒိန်းမတ် နှင့် ဖင်လန်, ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် ရုရှား
အဖွဲ့ စီ: နယ်သာလန် နှင့် ယူကရိန်း, သြစတီးယား နှင့် play-off အဖွဲ့ ဒီ.
အဖွဲ့ ဒီ: အင်္ဂလန် နှင့် ခရိုအေးရှား, ချက်ဇ်သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် အဖွဲ့ စီမှ အနိုင်ရရှိသော play-off
အဖွဲ့ E: စပိန် နှင့် ဆွီဒင်, ပိုလန် နှင့် အဖွဲ့ B မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ
အဖွဲ့ F:စားပွဲ ‌Aမှ အနိုင်ရရှိသူများ နှင့် ပေါ်တူဂီ, ပြင်သစ် နှင့် ဂျာမနီ
အဖွဲ့ A: တူရကီ နှင့် ဝေးလ်စ်, အီတလီ နှင့် ဆွစ်ဇလန်
အဖွဲ့ B: ဖင်လန် နှင့် ရုရှား ,ဒိန်းမတ် နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ
အဖွဲ့ C: ယူကရိန်း နှင့် အုပ်စု D မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ ,နယ်သာလန် နှင့် သြစတီးယား
အုပ်စု D: အင်္ဂလန် နှင့် အုပ်စု C မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ , ခရိုအေးရှား နှင့် ချက်ဇ်သမ္မတနိုင်ငံ
အုပ်စု E: ဆွီဒင် နှင့် အုပ်စု B မှ အနိုင်ရရှိလာသော သူများ, ပိုလန် နှင့် စပိန်
အုပ်စု F: အုပ်စု A မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ နှင့် ပြင်သစ်, ပေါ််တူဂီ နှင့် ဂျာမနီ
တတိယ နှင့် စတုတ္တ ပွဲစဥ်များ
အုပ်စု A: တူရကီ နှင့် ဆွစ်ဇလန်, အီတလီ နှင့် ဝေးလ်စ်
အုပ်စု B: ဖင်လန် နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဒိန်းမတ် နှင့် ရုရှား
အုပ်စု C: ယူကရိန်း နှင့် သြစတြီးယား, ဟော်လန် နှင့် အုပ်စု D မှအနိုင်ရရှိလာသောသူများ
အုပ်စု D: အင်္ဂလန် နှင့် ချက်ဇ် သမ္မတနိုင်ငံ, အုပ်စု C မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ နှင့် ခရိုအေးရှား
အုပ်စု E: ဆွီဒင် နှင့် ပိုလန်, စားပွဲ B မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ နှင့် စပိန်
အုပ်စု F: ဂျာမနီ နှင့်အုပ်စု A မှ အနိုင်ရရှိလာသောသူများ, ပေါ်တူဂီ နှင့် စပိန်
အထက်ပါဆောင်းပါးသည် သင့်အား ယူရို ၂၀၂၁ ခြေစစ်ပွဲရလဒ် နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးထားခဲ့သည်။ သင့်မှာလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်မိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာနှင့်အမှတ်ရစရာ ယူရိုလောင်းကစားရာသီကို တွေ့ကြုံခံစားစေလိုပါသည် ။